I-ATOM ngumenzi wobuchwephesha bezinxibelelanisi ezichanekileyo zombane ezihlanganisa i-R & D, imveliso kunye nentengiso.
Ibandakanya indawo yezityalo i-30000 yeemitha zesikwere kwaye inabasebenzi abangaphezu kwama-500, kukho malunga nekhulu lamagcisa obuchwephesha phakathi kwabo, Sinezixhobo zokuvelisa eziphambili kunye nezixhobo zokufumanisa ezinobunkunkqele, egxile kuphuhliso lweprodduction yezihlanganisi zeKhadi le-SD, izihlanganisi zeKhadi le-TF, Izihlanganisi zeSim khadi, izihlanganisi ze-FPC, izihlanganisi ze-USB, iBhodi ebhodini yezihlanganisi, ucingo kwizidibanisi zebhodi, ucingo ukuya kwizihlanganisi zebhodi, izihlanganisi zebhetri, izihlanganisi zeRF, isinxibelelanisi se-HDMI, izihlanganisi ze-Pin zentloko kunye nezihlanganisi zabasetyhini, emva kweminyaka yokukhula, i-ATOM ngoku ineqela labachwephesha abanamava, abaqeqeshiweyo nabangabasebenzi, i-80% yeemveliso ziyimveliso ezenzekelayo, Yintoni enokuhlangabezana neemfuno zabathengi kakuhle.
Ukholo, uyilo oluqhubekayo kunye nenkonzo ngumoya weshishini kunye nenjongo yomzabalazo weTekhnoloji ye-ATOM.
Ngeminyaka yemizamo eqhubekayo, i-ATOM iphuhlise uhlobo lwayo "ATOM" e China. Iphumelele ngempumelelo i-ISO9001 / ISO14001 / IATF16949 / ROHS / SGS izatifikethi kunye nezinye izatifikethi zenkqubo kwaye yafumana iimbeko ezininzi ezinje ngeshishini lesizwe eliphezulu, iShenzhen ishishini lobuchwephesha. Emva koko i-ATOM yaqalisa ubuqaqawuli kunye nohambo lokuphupha kwaye yakhula ngokumangalisayo ngendlela engummangaliso ngendlela yokuxhuma kunye nemida engaqhelekanga.
Iimveliso zisetyenziswa ikakhulu kumabala angamashumi amabini: iikhompyuter kunye neemveliso zepheripherali, iimveliso zombane zedijithali, unxibelelwano ngeemveliso zekhompyuter, iimveliso zekhompyuter zemoto, iimveliso zebhanki zokugcina izixhobo zombane, iimveliso zombane zonyango kunye nezixhobo zasekhaya iimveliso zombane, ukhuseleko kunye neemveliso zokhuselo kunye neemveliso ezaziwa ebusweni njl. Iimveliso zithandwa kakhulu kuthengiswa eAsia, eYurophu naseMelika.
I-ATOM ikhuthaza "abantu kuqala kunye nobuchule bokuyila", kwaye ibaleke inyani, inyani, umsebenzi ogqwesileyo nobukhali. I-ATOM nawe, abathengi bethu abaxabisekileyo, niqhubela phambili kwikamva eliqaqambileyo kunye nenyathelo elizinzileyo kunye nesitayile esinyanisekileyo.